EDuke32: Ahoana ny fametrahana sy filalaovana Duke Nukem 3D amin'ny GNU / Linux? | Avy amin'ny Linux
Ho an'ny anio, andro voalohany amin'ny volana Jona, mitondra lalao mahafinaritra hafa isika hatramin'ny taloha ka hatramin'ny fahafinaretana, mahaliana ary mitombo Lisitry ny lalao do Genre FPS (Shooter olona voalohany) inona no azontsika lalaovina GNU / Linux. Ary tsy iza izany fa ny taloha sy ny tontolo fantatra Duke Nukem 3D avy amin'ny tanan'ny "EDuke32".
"EDuke32" dia azo atao tsara, ho an'ireo izay mihevitra ny tenany Gamers de "Sekoly taloha", afaka milalao mahafinaritra sy kilalao mahafinaritra toy izany indray izy ireo Lalao FPS ao amin'ny GNU / Linux, manolo ny Windows 95/98, tamin'io taona volamena 16/32 Bit lalao io.
Ary ho an'ireo tia ny Lalao amin'ny Linux, ary indrindra ho an'ny FPS Lalao Gamers de "Sekoly taloha", hamela anao eto ambany ny sasany amin'ireo fidirana farany mifandraika aminay izahay loza sy lalao hafa mitovy amin'izany:
"GZDoom dia iray amin'ireo Seranan-tsambo 3 an'ny ZDoom ankehitriny, izay fianakaviana manana seranan-tsambo nohatsaraina ho an'ny Doom Engine ho famonoana ireo Operating Systems maoderina. Ireo Ports ireo dia miasa amin'ny Windows, Linux, ary OS X maoderina, manampy endri-javatra vaovao tsy hita tamin'ny lalao navoakan'ny Id Software tamin'ny voalohany. Ny seranana ZDoom taloha dia azo ampiasaina sy zaraina maimaimpoana. Tsy misy tombony azo amin'ny fivarotana azy. GZDoom sy ny taranany hatramin'ny andiany 3.0.0 dia nahazo alalana tamin'ny GPL ary iharan'ny fe-potoana sy ny fameperana ny fahazoan-dàlana vaovao." ¿Ahoana ny fomba filalaovana Doom sy lalao FPS mitovy amin'izany amin'ny GZDoom?
1 EDuke32: Duke Nukem 3D ho an'ny GNU / Linux
1.1 Inona no atao hoe EDuke32?
1.3 Misintona, mametraka, mampiasa ary pikantsary
EDuke32: Duke Nukem 3D ho an'ny GNU / Linux
Inona no atao hoe EDuke32?
Araka ny filazan'ny mpamolavola ao aminy tranokala ofisialy, "EDuke32" es:
"Masinina lalao maimaim-poana maimaimpoana ary fampifanarahana ny lalao shooter olona voalohany mahazatra ho an'ny PC antsoina hoe Duke Nukem 3D (Duke3D), azo alaina amin'ny Windows, Linux, Mac OS X, FreeBSD, fitaovana maro samihafa, ankoatry ny maro hafa. Ho fanampin'izay, nanampy singa sy fanavaozana mahasoa an'arivony mahasoa ho an'ny mpilalao mahazatra izahay, ary koa ny fahafaha-manao fanovana fanampiny sy ny fanitarana sora-baventy ho an'ireo mpamorona homebrew sy mpamorona mod. Maimaimpoana tanteraka ny EDuke32 hampiasa rindrambaiko loharano misokatra ho an'ny tanjona tsy ara-barotra rehetra."
Anisan'ireo maro endri-javatra, asa ary vaovao inona no tafiditra "EDuke32", ireto 10 manaraka ireto dia azo lazaina:
EDuke32 dia nahazo alalana tamin'ny alàlan'ny Lisansa GNU GPL sy ny fahazoan-dàlana BUILD.
Miasa amin'ny fomba natiora izy io fa tsy miankina amin'ny karazana fakana tahaka.
Mihazakazaka amin'ny vahaolana avo lenta izy io, toy ny: 3072 x 2304.
Mamela anao hisafidy eo amin'ireo mpizara roa OpenGL hafainganam-pandeha hafainganam-pandeha samy hafa, na ny maody lozisialy tsy mitongilana izay nianaranao.
Izy io dia manamboatra bibikely marobe tsy misy atahorana tamin'ny andron'ny DOS, fa mahafaty amin'ireo maodely maoderina fitadidiana voaaro. Noho izany, EDuke32 dia midona ambany noho ny voalohany.
Io no hany seranan-tsambon'i Duke3D novolavolaina sy notazomina nandritra ny taona maro.
Manasongadina ilay mpandika teny "Polymer" mahavariana an'i Plagman, izay misolo ny mpandika "Polymost" an'i Ken Silverman.
Izy io dia manana fanitarana vaovao marobe amin'ny rafitry ny scripting an'ny lalao, ahafahanao manao mods lalao izay mifaninana na dia ny lalao maoderina aza.
Mihazakazaka HRP miaraka amin'ny fanohanana ny endri-javatra rehetra, ny ankamaroany dia mitaky EDuke32; tsy misy seranana misy hafa afaka mihazakazaka HRP miaraka amina endri-javatra rehetra.
Manampia console feno fisongadinana, ao anatin'izany ny fifehezana ny fomba Quake, ny solonanarana baiko, ny fahavitan'ny vakizoro, ny tantaran'ny baiko feno, ny lahatsoratra miloko ary maro hafa.
naoty: Amin'ny teny anglisy ihany no misy azy.
Misintona, mametraka, mampiasa ary pikantsary
Raha te haka azy io dia mila manaraka ity manaraka ity fotsiny ianao rohy ary ampidino ny rakitra ankehitriny antsoina hoe:
Ary avy amin'ity iray hafa ity rohy, ilay rakitra antsoina hoe:
Ho an'ny fametrahana azy dia mila manafoana ny fisie fotsiny ianao «eduke32_src_20210629-9443-33e98f55a.tar.xz» ary ao anatin'ny fampirimana tsy misy zip dia noforonina ianao tsy maintsy mandika ny fisie "Duke3d.grp". Avy eo dia tsy maintsy atambatra izy io, mba hamoronana ilay azo ampiharina amin'ny alàlan'ity baiko manaraka ity avy ao anaty fampirimana noforonina tamin'ny famoahana azy:
Ary ho an'ny fampiasana azy (famonoana), raha misy fanangonana mahomby, ity baiko manaraka ity ihany no tokony hatao:
Ho fampiasana azo ampiharina bebe kokoa dia asaina omena anarana ny folder tsy misy zip "Eduke32". Ary raha misy ny fanangonana na fanatanterahana tsy mahomby dia andramo apetraka ireto fonosana ireto:
Para fampahalalana ofisialy bebe kokoa momba ny fametrahana sy ny fampiasana ny "EDuke32" momba ny isan-karazany Rafitra miasa, sy ny isan-karazany Fizarana GNU / Linux tohano, fidirana amin'ireto rohy manaraka ireto ao amin'ny Wiki:
Manangana EDuke32 amin'ny Linux
naoty: Ho an'ny fandinihana tranga anay dia nampiasainay ny Mamerina Linux antsoina hoe Fahagagana GNU / Linux izay miorina amin'ny MX Linux 19 (Debian 10), ary aorina manaraka ny «Torolàlana Snapshot MX Linux».
"EDuke32 no mpanjaka tsy azo iadian-kevitra ao amin'ny seranan-tsambo Duke Nukem 3D."
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «EDuke32», izay a milina lalao trano malalaka sy fampifanarahana ny kilalao kilalao olona kilasika voalohany ho an'ny PC antsoina Duke Nukem 3D; dia liana sy ilaina lehibe, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » EDuke32: Ahoana ny fametrahana sy filalaovana Duke Nukem 3D amin'ny GNU / Linux?
Bravo dia hoy izy:
Ary toy ny mahazatra tsy misy famerenana ireo fiteny misy.
Mamaly an'i Bravo
Miarahaba anao, Bravo. Misaotra anao tamin'ny hevitra sy fandinihanao. Vita, nanampy ny lahatsoratra: «Fanamarihana: Tsy misy afa-tsy amin'ny teny Anglisy, ao amin'ny fizarana fiasa.»
Deadpool dia hoy izy:
Aiza ny tranomboky?
Mamaly an'i Deadpool
Cheers, Deadpool. Misaotra tamin'ny hevitrao. Library (rakitra) inona no tondroinao? Vao avy nanandrana ny fomba fametrahana rehetra aho ary tena mety izany. Sa ny tianao holazaina dia ampahany amin'ny lalao izay misy tranomboky?
Deepin dia manaraka ny dingana amin'ny Windows 11 ary afaka mametraka apps Android ianao amin'ny alalàn'ny Store
Jona 2021: Ny tsara, ny ratsy ary ny mahaliana an'ny Free Software